Facebook Account ကို ID တင်ထားဖို့လိုလား? | Online Service Center Myanmar -->
Facebook Account ကို ID တင်ထားဖို့လိုလား?
ဒီအကြောင်းအရာကို အကောင့်တွေ၊ Page တွေ၊ ID မတင်ထားရင်ပျက်မယ် ဘာညာဆိုပြီး လုပ်စားနေကြသူတွေ #ဂျင်း ထည့်စဉ်က လာလာမေးကြလွန်းလို့ Post လေးတခုရေးခဲ့ပြီးပါပြီ၊ ဒါကတော့ ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ OSC-Myanmar ကနေ Security Service ယူထားတဲ့အကောင့်တခုကို အခြားတယောက်က ဒီအကောင့်မှာ ID Confirm မလုပ်ထားလို့ အကောင့်က မလုံခြုံဘူး၊ Hack လုပ်ခံရနိုင်တယ်ဆိုပြီး ပြောလာတယ်ဆိုပြီး Screenshot လာပြတာနဲ့ ဒါလေးကို Knowledge Sharing အနေနဲ့ ထပ်ရေးပေးလိုက်တာပါ။
ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး၊ Facebook Account ကို ဘာ ID မှမတင်ပဲနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်။
Facebook team ဘက်ကနေ ဒီလိုတောင်ပြောထားပါတယ်။
[Facebook ကို ဆက်လက်အသုံးပြုဖို့အတွက် သင့်ရဲ့အိုင်ဒီကို တင်ပြဖို့၊ ဒါမှမဟုတ် အတည်ပြုဖို့၊ လုံးဝ( လုံးဝ ) မလိုပါဘူး။ ဒါက မဟုတ်မမှန် ကောလဟာလတခုသာဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပို့စ်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာကြော်ငြာဖို့ ဒါမှမဟုတ် Boost လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင် သင့်အိုင်ဒီကို ( လုံးဝ ) မတင်ပါနဲ့။ အဲ့ဒီလိုကြော်ငြာတွေထည့်သွင်းဖို့ တကယ်ရဉ်ရွယ်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။]
လို့ အတိအကျ သတိပေးထားပြီးသားပါ။
ကဲ... ဒီတော့ ID မတင်ထားရင်ဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်၊ ID တင်ချင်ရင်လာခဲ့ပါ ဘယ်လောက်နဲ့လုပ်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့သူတွေက #ဂျင်းလိုက်ထည့် ပြီး လုပ်စားနေကြတယ်ဆိုတာကို ယုံကြပြီမလား?
အဲ့လို ဂျင်းလိုက်ထည့်နေတဲ့ လုပ်စားနေတဲ့သူတွေရဲ့ အလိမ်အညာစကားတွေကြားထဲမှာကြောက်လန့်ပြီး အကောင့်တွေကို ID သွားတင်ခိုင်းတော့ ပိုက်ဆံအလကားကုန်သွားကြတယ်မလား? ( အူကြ အကြတာပဲ ခံကြပေါ့။ )
#ID ကို မလိုအပ်ပဲ တင်ဖို့မလိုဘူးဆိုတာကို အားလုံးပဲသိသွားကြမယ်ထင်ပါတယ်။
အရင် ID မတင်ရင် အကောင့်တွေ Page တွေပျက်မယ်ဆိုတုန်းကရေးပေးထားတဲ့ Post ကိုလည်း ပြန်ဖတ်ပြီး ဗဟုသုတယူထားလိုက်ကြပါဦး၊ မဟုတ်ရင် ဂျင်းထည့်ပြီးလုပ်စားနေကြတဲ့ အကောင့်သူခိုးဂျပိုးတွေရဲ့ အလိမ်အညာတွေထပ်မိပြီး ပိုက်ဆံတွေထပ်ကုန်နေကြပါဦးမယ်။
"Facebook က ဘယ် Page, ဘယ် Account ကိုမှ ပိတ်သွားမှာမဟုတ်ပါ"
ကဲ... တော်သေးပြီ၊ တော်ရုံပဲ အူကြ၊ အကြစေချင်မိပါတယ်။
Aung Kyaw Soe ( 15.11.2020 - 8:45 PM )